Nidaamkeena - Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
Tusaalaha nidaamka dalbashada: Dalabka - walxaha xubinta ah ee falanqaynta nidaamka - dhanaan iyadoo loo eegayo shuruudaha tayada, iibsashada alaabada, geynta walxaha bakhaarka (baaritaannada tayada, tijaabinta) iyo isla mar ahaantaana si loo fuliyo wax soo saarka - isku day jarida (caaryada) - - alaabta la gooyay - maaddooyinka kontoroolka walxaha (qeyb ka mid ah waxay baartaa cabbirka tijaabada, qeexida, iwm), wax soo saarka waa la soo saaray, bacdi (hubinta badeecada ka hor, badeecooyinka dhammayska tiran Kormeerka, hubinta buuxda ee alaabta la dhammeeyay) -- badeecada galay bakhaarka (fiiri muunada by kormeeraha tayada) -- shixnadda
Habka wax soo saarka oo faahfaahsan
Sida laga soo xigtay maaddadu waxay u qaybsantaa agabka ugu muhiimsan, agabka caawinta, alaabta baakadaha, bakhaarada ilaa saddex bakhaar oo kala duwan, bakhaar kastaa wuxuu leeyahay bakhaar u xilsaaran maaraynta iyo xakamaynta. Ka dib marka dhammaan agabku yimaadaan bakhaarka, kormeeraha tayada ayaa ku samayn doona tijaabooyin jidheed iyo kiimiko agabka si waafaqsan shuruudaha macmiilka. Waxaa ku jira tijaabada xajinta midabka, tijaabada buufinta milixda, tijaabada dhimista, iwm. Walaxda waxay geli kartaa bakhaarka kaliya kadib marka ay gudubto aqbalaadda.
Waxaan haynaa laba goobood oo wax lagu gooyo, mid ka mid ah dharka, kan kale ee kartoonada iyo agabka kale ee saxda ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa diyaarin doona jarista caaryada wax-soo-saarka tijaabada ah, marka loo eego wax-soo-saarka tijaabada ah ee shirarka dhalmada ka hor. Waaxda tayada iyo waaxda wax soo saarku waxay ka wadahadlaan habka ugu wanaagsan ee habka loo maro tijaabada tijaabada si looga fogaado dhibaatooyinka tayada leh. Wax soo saarka tijaabada ayaa u qalma, ka hor inta aan la jarin walxaha rasmiga ah.
Waaxda Xakamaynta Agabka Waxsoosaarka
Dhammaan agabku waxa ay iman doonaan waaxda xakamaynta agabka ka hor inta aan loo dirin aqoon-is-weydaarsiga. Maareeyaha alaabtu wuxuu xisaabin doonaa tirada alaabta, iyo kormeeraha tayada ayaa sidoo kale hubin doona oo hubin doona cabbirka iyo tayada alaabta. Ka dib marka la gudbiyo kormeerka, alaabta waxaa loo diri doonaa aqoon isweydaarsiga. Maareeyaha alaabtu wuxuu sii daayaa agabka iyadoo loo eegayo jadwalka wax-soo-saarka. Ka dib marka alaabtu timaado aqoon-is-weydaarsiga, shaqaalaha maamulka aqoon-is-weydaarsiga ayaa sidoo kale hubin doona oo xaqiijin doona alaabta.
Kahor wax-soo-saarka ballaaran, aqoon-is-weydaarsigu wuxuu soo saari doonaa muunadaha qaansada si loo xaqiijiyo macaamilka, wax-soo-saarkana waxaa la habeeyaa kaliya ka dib marka la xaqiijiyo macmiilka. Ka dib marka la helo alaabta, maareeyaha aqoon-is-weydaarsigu wuxuu u qaybin doonaa agabka shaqaalaha ka mas'uulka ah habsocod kasta iyadoo la raacayo habka wax soo saarka. Nidaam kastaa wuxuu samayn doonaa xaqiijinta qaybta ugu horeysa, shaqaalaha tayada leh iyo shaqaalaha farsamada ayaa xaqiijinaya qaybta ugu horeysa, bilawga rasmiga ah ee wax soo saarka. Khad kasta oo wax-soo-saarku wuxuu lahaan doonaa shaqaale tayo leh oo hubinaya goobta iyo kormeerka geeddi-socod kasta si looga fogaado alaabada dhammaatay ee wax-soo-saarka. Khadka wax-soo-saarka oo dhan waa hawl-galka khadka. Qaybta baakadaha ayaa mas'uul ka ah baakadaha alaabta la dhammeeyey, baako kastana waxaa lagu qalabeeyaa kormeere tayo leh oo si buuxda u eegaya alaabta. Baakadaha alaabta ka dib, waxaa loo diri doonaa bakhaarka alaabta dhammaatay, ilaaliyaha bakhaarka si uu u xisaabiyo tirada ka hor inta aan la dhigin. .Waxaa xusid mudan in aan haysano saddex goobood oo wax-soo-saar ah, aqoon-is-weydaarsiga soo noqnoqda badan, aqoon-is-weydaarsiga tolida, aqoon-is-weydaarsiga alaabada xabagta, habka hawlgalka waa isku mid.
Alaabooyinka la dhammeeyay ee soo galay bakhaarka
Alaabooyinka la dhammeeyay waxa u daabulaya bakhaarka shaqaalaha aqoon-is-weydaarsiga, ilaaliyaha bakhaarka ayaa xisaabinaya tirada. Ka dib bakhaarka, kormeeraha alaabada dhammeeyey ayaa arki doona hubinta alaabta sida waafaqsan AQL. Isla mar ahaantaana samaynta warbixinta alaabta, calaamadee alaabta, kala saar alaabta tayada leh iyo kuwa aan u qalmin, alaabta aan u qalmin ayaa dib loogu celin doonaa aqoon isweydaarsiga dib-u-shaqaynta. Shixnadda waxa la diyaarin karaa oo keliya ka dib marka la helo warbixinta alaabta tayada leh ee kormeeraha.